Feno 10 taona ilay vono olona mahatsiravina tetsy Ambohitsorohitra ny tolakandron’ny sabotsy izay nitifiran’ireo miaramila ireo vahoaka tanam-polo ka nahafatesana tsy manan-tsiny 48 ary nandratrana aman-jatony.
Androany 7 febroary 2019, nisy ny lanonana natao tetsy Ambohitsorohitra hahatsiarovana ireo mahery fo. Nisy arak’izany ny fametrahana fehezam-bonikazo teo amin’ny tsangam-bato fahatsiarovana, eo anolohan’ny lapan’Ambohitsorohitra. Avy eo dia nisy ny lanonam-pahatsiarovana natao tao antokotanin’ny lapa. Tao anatin’izany no nanononana tsirairay avy ny anaran’ireo 48 namoy ny ainy sy ireo 180 naratra sy nitondra takaitra vokatry ny tifitr’ireo miaramila ny 7 febroary 2009. Izany no natao dia ny tsy hanadinoina azy ireo ka hiraikitra ao anatin’ny sain’ny rehetra izy rehetra.
Nanome voninahitra ny lanonana manontolo ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay Christian notronin’ireo ministra ao anatin’ny governemanta.
Nandritra ny kabariny no nanazavan’ny Filoham-pirenena ny antony nandeferany ka nanekeny ny tsy fahazoana milatsaka tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2013, “mba tsy hisy intsony ny rà latsaka”.
“Fa ankehitriny, efa ny ho avy no banjinina, ny fampandrosoana ny firenena no tanjona”, hoy ny Filoha izay naka ohatra ny fampandrosoana an’i Rwanda.
Fa ny tena nampihetsi-po tamin’ity lanonana ity dia ny naheno an’I Solange, ilay tovovavy kamboty tsy fidiny, nitantara ny fanampiana nataon’Andriamatoa Andry Rajoelina taminy, nandraisany an-tanana ny fandohavana ny saram-pianarany manontolo. Anisan’ireo namoy ny ainy ny andron’ny 7 febroary 2009 ny rain’I Solange